Choputa Osimiri Katidral na Lugo | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Osimiri
La Playa de las Catedrales amaworị ama maka usoro okwute ya, ịbụ onye otu n'ime ihe kachasị mma na Spain. Ewu ewu ya toro nke ukwuu, nke mere na ọtụtụ mmadụ na-abịa kwa afọ iji hụ oke osimiri a, nke nwere ụfọdụ ọdịiche. Ọ bụ nnukwu nleta, n’ihi na a na-ahụta ya ka ihe ncheta sitere n’okike dị oke ọnụ ahịa yana n’ihi na gburugburu ya makwara mma dị ukwuu.
Nke a osimiri dị na mgbago ugwu Spain, na obodo kwụ ọtọ nke Galicia, kpọmkwem na mpaghara Lugo. Gbè a nwere naanị mpaghara dị n'ụsọ oké osimiri n'ebe ugwu, ebe osimiri a ma ama dị. Anyị ga-amatakwu ntakịrị banyere ya na ndụmọdụ ị ga-aga leta ya.
1 Ebee ka Osimiri Katidral dị
2 Otu esi aga n'akụkụ osimiri
3 Ọrụ dị n'akụkụ osimiri
4 Tiketi na osimiri
5 Ọchịchọ nke osimiri
6 Gaa na osimiri
7 Lee gburugburu
Ebee ka Osimiri Katidral dị
Osimiri a dị na A maara dị ka Mariña Lucense, nke bụ ụsọ oké osimiri nke ógbè Lugo, nke dị na mpaghara ugwu ya, n'ihu Oké Osimiri Cantabrian. Osimiri dị n'etiti kansụl nke Ribadeo, nke ọ bụ nke ya. A maara ebe a na ókèala ya na Isi nke Asturias. Osimiri dịpụrụ adịpụ site na obodo ndị mepere emepe, na mpaghara nke oghere ndị gbara ya gburugburu, na-eme ka ọ maa mma.
Otu esi aga n'akụkụ osimiri
Ọ bụrụ na anyị ga-aga n'ụsọ osimiri anyị nwere ike ịga ebe ndị ọzọ dị ka Ribadeo ma were N-634 ịdapụ mgbe e mesịrị gaa n'okporo ụzọ pere mpe, LU-P-5209. N'ime ebe a ọ dị mma iji GPS, ọ bụ ezie na enwere ihe ngosi, mana enweghị nnukwu ụzọ, dịka enwere ike ịtụ anya site na ebe ndị njem nleta dị otú ahụ.
Ọrụ dị n'akụkụ osimiri
Mgbe anyị rutere n'ụsọ osimiri, anyị ga-ahụ a nnukwu ebe a na-adọba ụgbọala ịhapụ ụgbọ ala ahụ. Ga-agagharị ntakịrị n'okporo ụzọ na-adịghị ọcha ma anyị ga-abata n'ọnụ ụzọ osimiri. Enwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na mpaghara ahụ mana dịka anyị kwurula na ọ dịpụrụ adịpụ, yabụ ọ bụrụ na anyị ga-anọ ụbọchị ọ ka mma ibute nri na ihe niile anyị chọrọ. Na mpaghara ahụ, enwere ụfọdụ ebe picnic nwere echiche dị egwu banyere oke osimiri, yabụ ọ bụ ezigbo mma iri ebe a.
Tiketi na osimiri
Ruo afọ ole na ole gara aga ọnụ ụzọ ịhụ osimiri ahụ bụ n'efu. Agbanyeghị, mmụba nke mmụba nke ndị njem mere ka gọọmentị belata nleta ndị a iji chebe osimiri, ahịhịa na anụmanụ. Ugbu a ị nwere ike ịme ndoputa n'ịntanetị tupu oge eruo. Ọ dịghị mkpa n'oge oge dị ala, ebe ọ na-enwekarị nleta zuru oke, mana site na Julaị 1 rue Septemba 30 bụ iwu wepụ tiketi na-aga n'ihu. Ọ dị mkpa ịmara nke a ka ịghara ịbịa ma chọpụta na anyị enweghị ike ịga n'akụkụ osimiri.
Ọchịchọ nke osimiri
A naghị akpọ osimiri a Playa de las Catedrales, dịka onye ọ bụla maara, mana a na-akpọ ya Playa de Aguas Santas. Na mgbakwunye, ọ dị mkpa na mbụ mara tides, n'ihi na inwe ike ịga n'akụkụ osimiri ga-adabere na ha. N'elu oke ebili mmiri ebe aja a na-efu kpamkpam, ebe ọ bụ na mmiri kpuchiri ya. Enwere ike ileta ya naanị mgbe ebili mmiri dị ntakịrị ma ị ga-a attentiona ntị na ntuziaka nke ndị ọrụ nchekwa ndụ, ebe ọ bụ na ebili mmiri na-agbanwe n'oge ụfọdụ na-agba ngwa ngwa.
Enwere steepụ toro ogologo ogologo ịgbada n'ụsọ osimiri. Mgbe ebili mmiri siri ike, nzọụkwụ ikpeazụ nwere ike ịdịtụ ntakịrị site na aja nke osimiri, yabụ onye ọ bụla kwesịrị ịkpachara anya, ọkachasị ndị okenye na ụmụaka. N'otu oge n'ụsọ osimiri ị nwere ike ịga ije na ya mana na-eburu n'uche mgbe niile bụ mpaghara ndị ị na-enweghị ike ịga na ihe anyị agaghị akpaghasị anụmanụ ndị ahụ kedu nke dị n'ụsọ osimiri. N'ime osimiri a, ihe mberede mere na nso nso a n'ihi oke nkume dara, yabụ ị ga-akpachara anya na mpaghara anaghị egbochi.
Gaa na osimiri
Nleta n'ụsọ osimiri nke Katidral bụ akụkụ kachasị mma. I nwere ike ịga ije n’ime ya na-enwe mmasị na usoro ndị ahụ dị egwu nke emere site na ikuku na mmiri. Ha bụ nnukwu ugwu. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhụ arches nke na-echetara anyị ebe a na-efe efe nke katidral, yabụ aha osimiri. E nwekwara ụfọdụ ọgba na ebe mmiri na-anakọta. A pụrụ ịhụ osimiri a site n'elu, site na ọnụ ọnụ ugwu, yabụ nkwanye bụ iji were nwayọ ma nwee ọmarịcha foto.
Ọ bụrụ na anyị nwere oge mgbe anyị gachara Playa de las Catedrales, anyị ka nwere ike ịnụ ụtọ ịhụ obodo mara mma nke Ribadeo. Ya E kwuwo na obodo ochie ahụ bụ Akụ nke Mmasị Omenala, ebe enwere ulo mara mma na ulo uka Atalaia nke iri na abuo. Na ebe a ọ bụkwa nnukwu echiche ịchọta ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ iji nwaa ụtọ nri Galician dị ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Osimiri Katidral na Lugo, Galicia